Sawir gacmeedka - Geofumadas
IMARA.EARTH bilowga oo cabiraya saameynta deegaanka
Arrintii 6-aad ee Twingeo Magazine, waxaan fursad u helnay inaan wareysi ka qaadno Elise Van Tilborg, oo ah aasaasaha IMARA.Earth. Bilaabashadan Dutch-ka ah ayaa dhowaan ku guuleysatay Tartanka Planet ee Copernicus Masters 2020 waxaana ka go'an adduun waara iyadoo loo marayo isticmaalka wanaagsan ee deegaanka. Hal ku dhigoodu waa "Muuji saameyntaada deegaanka", waxayna sameeyaan ...
cadastre drone Joomatikyada GIS
Master ee joomatari sharciyeed.
Maxaa laga filan karaa Macallinka joomatariyeed ee Sharciga ah. Taariikhda oo dhan waxaa la go'aamiyay in cadastre-ka hantida maguuraanka ahi uu yahay aaladda ugu wax ku oolka badan ee maaraynta dhulka, taasna waxaa ugu mahadnaqaya, kumanaan xog ah oo muuqaal iyo muuqaal ahaaneed oo la xiriira dhul la helay. Dhinaca kale, waxaan aragnay in dhowaan ...
Cartografia, cadastre, Baridda CAD / GIS, Geospatial - GIS
Iskodland waxay ku biirtay Heshiiska Qeybta Dadweynaha ee Geospatial
Dowladda Scottish-ka iyo Guddiga Caalamiga ah ee Geospatial waxay ku heshiiyeen in laga bilaabo Maajo 19, 2020 Scotland ay ka mid noqoneyso Heshiiska Qeybaha Dadweynaha ee dhowaan la bilaabay. Heshiiskan qaran wuxuu hadda beddeli doonaa heshiiskii khariidaynta Scotland ee hadda (OSMA) iyo qandaraasyada Greenspace Scotland. Isticmaalayaasha Dowladda Scottish-ka, ...
Esri wuxuu daabacaa buugga shaqada dawladda ee Smarter oo uu qoray Martin O'Malley
Esri, wuxuu ku dhawaaqay daabacaadda Buug-hawleedka Dowladda ee Xariifka ah: Tilmaamaha Hirgelinta ee 14-Toddobaadka ah ee Xukunka Natiijooyinka uu soo saaray Guddoomiyihii hore ee Maryland Martin O'Malley. Buuggu wuxuu kala daadinayaa casharradii uu ka qaatay buuggiisii ​​hore, Dowlad Smarter: Sidee Loo Maamulaa Natiijooyinka Da'da Macluumaadka, wuxuuna si kooban u soo bandhigayaa is-dhexgal, qorshe si fudud loo raaco ...
ArcGIS-ESRI, blog, Cartografia, Leisure / waxyi
HALKAN Teknolojiyada, xogta goobta iyo teknolojiyada teknoolajiyada, iyo Loqate, oo ah hormoodka horumariye ee xaqiijinta cinwaanka caalamiga ah iyo xalalka geocoding, ayaa ku dhawaaqay iskaashi ballaadhan si loo keeno ganacsiyada ugu dambeeyay cinwaanka qabashada, ansaxinta iyo teknolojiyada geocoding. Ganacsiyada dhammaan warshadaha waxay u baahan yihiin xogta cinwaanka ...
AulaGEO, waa koorsada ugu wanaagsan ee xirfadlayaasha Injineerinka
AulaGEO waa soo jeedin tababar, oo ku saleysan muuqaalka guud ee Geo-injineernimada, oo leh qaybo isku dhafan oo ku jira Is-beddelka Geospatial, Engineering iyo Operations. Naqshadeynta habka waxay ku saleysan tahay "Koorsooyinka Khabiirka", oo diiradda lagu saaray kartida; Waxay macnaheedu tahay inay diiradda saarayaan waxqabadka, qabashada howlaha kiisaska la taaban karo, doorbidayo hal mashruuc oo keliya iyo ...
AutoCAD-AutoDesk, Cartografia, cadastre, Koorsooyinka AulaGEO, Baridda CAD / GIS, Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, Engineering, Microstation-Bentley, qgis
Waxaan eegnay bog aad u xiiso badan, oo loo yaqaan 'thetruesizeof', waxay ku jirtay shabaq sanado ah dhexdeedana dhexdeeda - qaab aad u dhexgal ah oo fudud - adeegsadaha wuxuu sameyn karaa isbarbardhiga aagga dusha sare ee u dhexeeya hal ama dhowr waddan. Waxaan hubnaa ka dib markaad isticmaasho qalabkan isdhexgalka, waxaad yeelan doontaa ...
UNIGIS WORLD FORUM, Cali 2018: Khibradaha GIS ee qeexaya isla markaana beddelaya ururkaaga
UNIGIS Latin America, Universität Salzburg iyo Jaamacadda ICESI, waxay leeyihiin raaxo aad u weyn oo horumarineed sanadkan, maalin cusub oo ka mid ah dhacdooyinka UNIGIS WORLD FORUM, Cali 2018: Khibradaha GIS ee qeexaya isla markaana beddelaya ururkooda, Jimcaha, Nofeembar 16 Jaamacadda ICESI -Auditorio Cementos Argos, Cali, Kolombiya. Gaaritaanku waa lacag la'aan. Sidaas…
ArcGIS-ESRI, Cartografia, Baridda CAD / GIS, Geospatial - GIS
EOS waxay kuu oggolaaneysaa inaad fuliso hawlaha sawir-qaadidda ee shabakada
Hawlaha falanqaynta muuqaalka badankood ee ubaahanaa barnaamijka Erdas Imagine ama barnaamijka ENVI hadda waa khadka tooska ah ee barnaamijka EOS. Adeeggan cusub ee daruuriga ah ee cusub ee ay bilaabeen EOS Falanqaynta Xogta ee xirfadleyda GIS ayaa xal dhammaystiran u ah raadinta, falanqaynta, keydinta iyo aragtida ballaaran ...
Lagu heli karo Bilaash - Template si loogu beddelo isku-duwaha UTM Geographic
Wakhti xaddidan oo kaliya
Fursadaha badan ee loo adeegsan karo isticmaalka Web GIS hadda
Mawduuca laga faalloonayo maanta waa Web GIS. Wixii 'aan la ogeyn', waxaa si fudud loogu turjumi karaa 'GIS-ka Webka', laakiin maxay dhab ahaan tan macnaheedu tahay? Maxay yihiin baaxadiisa? Maxay 'u leedahay fursado badan oo dalab ah' sida ku xusan cinwaanka boostadan? Waxaa jira shan sababood oo uu Eric van Rees u adeegsado ...
Sida loo abuuro map caado oo aanay u dhiman in isku daygii?
Shirkadda Allware ltd waxay dhowaan soo bandhigtay Qaab-dhismeedka Webka loo yaqaan eZhing (www.ezhing.com), kaas oo aad 4 tallaabo ku yeelan karto khariidad kuu gaar ah oo leh tilmaamayaal iyo IoT (Dareemayaal, IBeacons, Alamas, iwm.) Dhammaantood waqtiga dhabta ah. 1.- Abuur Naqshaddaada (Aagagga, Waxyaabaha, Jaantusyada) Naqshadeynta -> Keydso, 2.- Magaca alaab-lahayaasha -> Keydso, 3.- Soo bandhigo ...
Cartografia, Featured, Google Earth / Maps, aragti ugu horeysay
Miisaanka Twilight The
Kani waa maqaal xiiso leh oo uu qoray Regis Wellausen oo lagu daabacay joornaalka 'MundoGEO Magazine', kaas oo ina xusuusinaya dib-u-noqoshada bayaannadii ka soo baxay dhacdadii Catastro2014 ee ay sameeyeen FIG labaatan sano ka hor, gaar ahaan la xidhiidha qaabaynta beddelka sawir-gacmeedka dhaqameed. Hindisaha xallinta mansabka si loo beddelo astaamaha gabowga.…
Cabirka dhabta ah ee wadamada
thetruesize.com waa goob xiiso badan, oo dalalku ku yaali karaan daawadeyaasha GoogleMaps. Adiga oo jiidaya walxaha, waxaad arki kartaa sida waddammada loogu qalloocdo iyada oo lagu kala duwan yahay loolka. Sida sawirka ka muuqata, saadaasha cilmiga, markii la isku dayayo in saadaal laga sameeyo diyaarad ayaa ...
Page 1 Page 2 Page 3 ... Page 7 page Next